Xaafad ku taala magaaladda Göteborg oo goor dhow lugu dilay labbo ruux oo somali ah - iftineducation.com
Xaafad ku taala magaaladda Göteborg oo goor dhow lugu dilay labbo ruux oo somali ah
iftineducation.com – Xaafadda Förlunda ee ku taala magaaladda Göteborg, ayaa caawa waxaa lugu dilay labbo ruux. Dilkaan ayaa yimid sida wararku sheegayaan xabaddo lugu furay.
Saacadu markeey aheyd 8.30 ayaa dhawaaqa xabaddo laga maqlayey xaafaddaasi. Booliskana waxaa ay goor dambe cadeeyeen in labbo ruux halkaasi ku dhinteen ka dib markii la dilay.
Booliska iyo gar gaarka deg dega ah (aambalaasta) ayaa halkaasi gaaray, waxaana la xiray gebi ahanaba xaafaddii xabadaha laga maqlyey iyadoo ilaa iyo iminka baaritaano ay socdaan.
Boolisku waxaa ay sheegeen in labbo qof ay la baxsadeen dhug dhugleey ama mooto kuwaas oo lo maleeynayo ineey falka labada qof lugu dilay ay ku lug leeyihiin.Balse waxaa ay sheegeen ineeysan jirin cid hadda farta lugu fiiqo.
Göteborg ayaa mudooyinka ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dilal u dhaxeeya kooxo iska soo horjeedo. Dilkii ugu dambeeyey ayaa waxaa bishii sibteember hortaanteedii waxaa lugu dilay Yuusuf Warsame oo ah wiil yar oo soomaali 8 jir ah.